တစ်မှတ်စီ ခွဲယူခဲ့ကြပြီး အဲဗာတန်တို့ နစ်နာခဲ့တဲ့ ဂွတ်ဒီဆန်ပါ့ခ်က သရေပွဲ – Sports A2Z
အဲဗာတန်တို့အနေနဲ့ ဒီနေ့ပွဲကိုသာ အနိုင်ရရှိခဲ့ရင် အဆင့် ၁၀ အတွင်း ဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်သလို ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့် လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုလည်း ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အဝေးကွင်းကောင်းတဲ့ ဆောက်သမ်တန်ရဲ့ ကစားပုံကြောင့် အခက်တွေ့ခဲ့ရပြီး နောက်က လိုက်ကစားပြီးမှ သရေတစ်မှတ် ရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲချိန် ၂၁ မိနစ်မှာ အဲဗာတန်တို့ ထိုးဖောက်လာခဲ့ပြီး ဘယ်တောင်ပံက ဒီညီရဲ့ ဖြတ်တင်ဘောကို အီဝိုဘီ ကန်သွင်းရာမှာ ဂိုးသမား အဲလက်စ် မက္ကာသီ ကာကွယ်သွားခဲ့လို့ အဖွင့်ဂိုးနဲ့ ဝေးခဲ့ရပြီး ပွဲချိန် ၂၇ မိနစ်မှာတော့ အစကတည်းက လဲချင်ချင်ဖြစ်နေတဲ့ ဝါ့ဒ်ပရောက်စ်ကို အန်ဒရီ ဂိုမက်စ်က ဝင်တိုက်မိခဲ့လို့ ဆောက်သမ်တန်တို့ ပင်နယ်တီ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီပင်နယ်တီကို ဆောက်သမ်တန်အသင်းခေါင်းဆောင်သစ်အဖြစ် တာဝန်ယူနေတဲ့ ဝါ့ဒ်ပရောက်စ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ကန်သွင်းယူခဲ့ရာမှာ ကန်ချက်က ဂိုးသမား ပစ်ခ်ဖို့ဒ်ကို လှည့်စားနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဂိုးဘားတန်းကို ထိပြီး ထွက်သွားခဲ့လို့ ဧည့်သည်တွေ အဖွင့်ဂိုးနဲ့ လွဲချော်ခဲ့ရပါတယ်။
ပွဲချိန် ၃၁ မိနစ်မှာတော့ အဲဗာတန်ဘက်က ဒီညီ ဘောလုံးဆွဲယူလာတာကို ဆောက်သမ်တန်ကွင်းလယ်က ဝိုင်းဖျက်ပြီး ဘောလုံးပြန်ရခဲ့တဲ့ အမ်းစထရောင်းက ချပေးတာကတစ်ဆင့် အသင်းရဲ့ ဂိုးသွင်းဘုရင် ဒန်နီအင်းစ်က ဂိုးသမား ပစ်ခ်ဖို့ဒ်ကို လိမ်ပြီး သူ့ရဲ့ ဒီရာသီ ၁၉ ဂိုးမြောက် ပရီးမီးယားလိဂ်ဂိုးကို သွင်းယူသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဂိုးအတွက် အဲဗာတန်တို့ လူကျွံဘောအဖြစ် ဝိုင်းဝန်းစောဒကတက်ခဲ့ကြပေမယ့် အသင်းရဲ့ လူကျွံဘောဖမ်းမှုမှာ ညာနောက်ခံလူ ရှေးမတ်စ် ကိုးလ်မန်းတစ်ယောက် ရှေ့တက်နေရာယူတာ နောက်ကျနေခဲ့ပြီး ဒန်နီအင်းစ်နဲ့ တစ်တန်းတည်းမှာ ရှိနေလို့ ဂိုးကို ခွင့်ပြုခဲ့ရပါတယ်။
⚽️ x 1️⃣4️⃣ for @richarlison97 in 2019/20. #EFC ? pic.twitter.com/E5MFu9MTyJ
ပွဲချိန် ၄၃ မိနစ်မှာတော့ အဲဗာတန်ခံစစ်က ဘောလုံးအပေးအယူလုပ်လာခဲ့ပြီး ဘယ်နောက်ခံလူ ဒီညီရဲ့ တိကျတဲ့ အဝေးဘော ပေးပို့မှုကို ရရှိသွားခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးလ်တောင်ပံတိုက်စစ်မှူး ရစ်ချာလစ်ဆန်က နောက်ခံလူနှစ်ယောက်ကြားကနေ ဘောလုံးကို တစ်ချက်ထိန်းပြီး အပြင်းကန်သွင်းခဲ့ရာမှာ မက္ကာသီ မတားဆီးနိုင်ခဲ့ဘဲ အိမ်ရှင်တွေ ချေပဂိုး ပြန်ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပထမပိုင်းမှာ တစ်ဂိုးစီ သရေကျနေခဲ့ကြပြီး ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ နှစ်သင်းစလုံး အပြန်အလှန် တိုက်စစ်ဆင်ခဲ့ကြပေမယ့် နှစ်သင်းစလုံးရဲ့ အဆုံးသတ်ပိုင်းက မတိကျခဲ့ကြလို့ အနိုင်ဂိုးကိုတော့ ထပ်မံရှာဖွေနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြဘဲ ဂွတ်ဒီဆန်ပါ့ခ်မှာ သရေတစ်မှတ်စီကိုပဲ ခွဲယူခဲ့ကြရပါတယ်။
ဒီနေ့ပွဲမှာ ဆောက်သမ်တန်အသင်းရဲ့ ကစားအားကို အသိအမှတ်ပြုရမှာဖြစ်ပြီး ဘောလုံးကိုင်ကစားနိုင်ခဲ့သလို ပွဲကို ထိန်းချုပ်သွားနိုင်ခဲ့ပြီး အိမ်ရှင်တွေထက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ကစားဟန်ကို ပြသသွားနိုင်ခဲ့သလို အခွင့်အရေးတွေကိုလည်း ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီး အန်ဆယ်လော့တီကို စိတ်ရှုပ်စေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သရေရလဒ်ကတော့ နှစ်သင်းစလုံးအတွက် နစ်နာစရာဖြစ်ခဲ့ပြီး ဥရောပဝင်ခွင့်နဲ့တော့ ဒီနှစ်သင်းနဲ့ သိပ်မဆိုင်တော့သလို ငွေသုံးထားခဲ့တဲ့ အဲဗာတန်တို့ကတော့ ပိုပြီးနစ်နာခဲ့တယ်လို့ သုံးသပ်လိုက်ရပါတယ်။
UNICODE: အဲဗာတနျတို့အနနေဲ့ ဒီနပှေဲ့ကိုသာ အနိုငျရရှိခဲ့ရငျ အဆငျ့ ၁၀ အတှငျး ဝငျရောကျနိုငျမှာဖွဈသလို ယူရိုပါလိဂျဝငျခှငျ့ လမျးကွောငျးပျေါကိုလညျး ရောကျလာနိုငျခဲ့ပမေယျ့ အဝေးကှငျးကောငျးတဲ့ ဆောကျသမျတနျရဲ့ ကစားပုံကွောငျ့ အခကျတှခေဲ့ရပွီး နောကျက လိုကျကစားပွီးမှ သရတေဈမှတျ ရယူနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ပှဲခြိနျ ၂၁ မိနဈမှာ အဲဗာတနျတို့ ထိုးဖောကျလာခဲ့ပွီး ဘယျတောငျပံက ဒီညီရဲ့ ဖွတျတငျဘောကို အီဝိုဘီ ကနျသှငျးရာမှာ ဂိုးသမား အဲလကျဈ မက်ကာသီ ကာကှယျသှားခဲ့လို့ အဖှငျ့ဂိုးနဲ့ ဝေးခဲ့ရပွီး ပှဲခြိနျ ၂၇ မိနဈမှာတော့ အစကတညျးက လဲခငျြခငျြဖွဈနတေဲ့ ဝါ့ဒျပရောကျဈကို အနျဒရီ ဂိုမကျဈက ဝငျတိုကျမိခဲ့လို့ ဆောကျသမျတနျတို့ ပငျနယျတီ ရရှိခဲ့ပါတယျ။
ဒီပငျနယျတီကို ဆောကျသမျတနျအသငျးခေါငျးဆောငျသဈအဖွဈ တာဝနျယူနတေဲ့ ဝါ့ဒျပရောကျဈကိုယျတိုငျပဲ ကနျသှငျးယူခဲ့ရာမှာ ကနျခကျြက ဂိုးသမား ပဈချဖို့ဒျကို လှညျ့စားနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ဂိုးဘားတနျးကို ထိပွီး ထှကျသှားခဲ့လို့ ဧညျ့သညျတှေ အဖှငျ့ဂိုးနဲ့ လှဲခြျောခဲ့ရပါတယျ။
ပှဲခြိနျ ၃၁ မိနဈမှာတော့ အဲဗာတနျဘကျက ဒီညီ ဘောလုံးဆှဲယူလာတာကို ဆောကျသမျတနျကှငျးလယျက ဝိုငျးဖကျြပွီး ဘောလုံးပွနျရခဲ့တဲ့ အမျးစထရောငျးက ခပြေးတာကတဈဆငျ့ အသငျးရဲ့ ဂိုးသှငျးဘုရငျ ဒနျနီအငျးဈက ဂိုးသမား ပဈချဖို့ဒျကို လိမျပွီး သူ့ရဲ့ ဒီရာသီ ၁၉ ဂိုးမွောကျ ပရီးမီးယားလိဂျဂိုးကို သှငျးယူသှားနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဒီဂိုးအတှကျ အဲဗာတနျတို့ လူကြှံဘောအဖွဈ ဝိုငျးဝနျးစောဒကတကျခဲ့ကွပမေယျ့ အသငျးရဲ့ လူကြှံဘောဖမျးမှုမှာ ညာနောကျခံလူ ရှေးမတျဈ ကိုးလျမနျးတဈယောကျ ရှတေ့ကျနရောယူတာ နောကျကနြခေဲ့ပွီး ဒနျနီအငျးဈနဲ့ တဈတနျးတညျးမှာ ရှိနလေို့ ဂိုးကို ခှငျ့ပွုခဲ့ရပါတယျ။
ပှဲခြိနျ ၄၃ မိနဈမှာတော့ အဲဗာတနျခံစဈက ဘောလုံးအပေးအယူလုပျလာခဲ့ပွီး ဘယျနောကျခံလူ ဒီညီရဲ့ တိကတြဲ့ အဝေးဘော ပေးပို့မှုကို ရရှိသှားခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးလျတောငျပံတိုကျစဈမှူး ရဈခြာလဈဆနျက နောကျခံလူနှဈယောကျကွားကနေ ဘောလုံးကို တဈခကျြထိနျးပွီး အပွငျးကနျသှငျးခဲ့ရာမှာ မက်ကာသီ မတားဆီးနိုငျခဲ့ဘဲ အိမျရှငျတှေ ခပြေဂိုး ပွနျရယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ပထမပိုငျးမှာ တဈဂိုးစီ သရကေနြခေဲ့ကွပွီး ဒုတိယပိုငျးမှာတော့ နှဈသငျးစလုံး အပွနျအလှနျ တိုကျစဈဆငျခဲ့ကွပမေယျ့ နှဈသငျးစလုံးရဲ့ အဆုံးသတျပိုငျးက မတိကခြဲ့ကွလို့ အနိုငျဂိုးကိုတော့ ထပျမံရှာဖှနေိုငျခွငျးမရှိခဲ့ကွဘဲ ဂှတျဒီဆနျပါ့ချမှာ သရတေဈမှတျစီကိုပဲ ခှဲယူခဲ့ကွရပါတယျ။
ဒီနပှေဲ့မှာ ဆောကျသမျတနျအသငျးရဲ့ ကစားအားကို အသိအမှတျပွုရမှာဖွဈပွီး ဘောလုံးကိုငျကစားနိုငျခဲ့သလို ပှဲကို ထိနျးခြုပျသှားနိုငျခဲ့ပွီး အိမျရှငျတှထေကျ ပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့ ကစားဟနျကို ပွသသှားနိုငျခဲ့သလို အခှငျ့အရေးတှကေိုလညျး ဖနျတီးနိုငျခဲ့ပွီး အနျဆယျလော့တီကို စိတျရှုပျစခေဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။ သရရေလဒျကတော့ နှဈသငျးစလုံးအတှကျ နဈနာစရာဖွဈခဲ့ပွီး ဥရောပဝငျခှငျ့နဲ့တော့ ဒီနှဈသငျးနဲ့ သိပျမဆိုငျတော့သလို ငှသေုံးထားခဲ့တဲ့ အဲဗာတနျတို့ကတော့ ပိုပွီးနဈနာခဲ့တယျလို့ သုံးသပျလိုကျရပါတယျ။